June 14, 2020 - PARIJATMEDIA
संक्रमित आमा’को दूधबाट बच्चामा सं’क्रमणको ख’तरा हुन्छ ? यस्तो भन्छन् डब्ल्यूएचओ [जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ]
काठमाडौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रेयसुसले को’रोना भा’इरस (कोभिड-१९) सं’क्रमित आमाहरुलाई आफ्नो नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउन नछा’ड्न आग्रह गरेका छन् । जेनेभामा आयोजित प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै उनले अध्ययनमा बच्चालाई आमाको दूध को’रोना भा’इरसको सं’क्रमणको जो’खिमको तुलनामा धेरै लाभदायक पाइएको बताएका हुन्। सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘ठूला मानिसको तुलनामा बच्चालाई कोभिड-१९ को जो’खिम कम हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर, अरु धेरै रो’गहरुबाट बच्चाहरुलाई धेरै जो’खिम हुन सक्छ र स्तनपानबाट यस्ता रोगहरुलाई रोक्न सकिन्छ । अहिलेको प्रमाणअनुसार डब्ल्यूएचओ यो सल्लाह दिन्छ कि को’रोना भा’इरसको संक्र’मणको जो’खिमभन्दा स्तनपानको फाइदा बढी हुन्छ।’ गेब्रेयेसुसले सं’क्रमित वा शं’का’स्पद सं’क्रमित आमाको अवस्था ग’म्भीर नभएसम्म नवजात शिशुलाई उनीहरुभन्दा टाढा राख्न नहुने बताएका छन्। डब
नेपालका मधे’सी दलले मोदि’को औकात देखाईदिए, भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वैन।
काठमाडौं। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको हस्तक्षे’पको वि’रोध हुँदै आए पनि संविधानमै ती भूमि सूचीकृत हुने अवस्था पहिलो पटक मिलेको छ । शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नेपालको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई एक मतले पारित भएपछि सूचीकृतको बलियो आधार खडा भएको हो। नेपालको संसदले संविधान संशोधन पारित गरेसँगै भारतमा अनेक टिका-टिप्पणी शुरु गएको छ। यस विषयमा नाम चलेका विश्लेषक देखि अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुले प्रतिक्रिया दिरहेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले चालेको नयाँ कदमले सीमा वि’वाद वार्तामार्फत समाधान गर्ने समझदारी पनि उ’ल्लंघन गरेको आ’रोप लगाइरहेका बेला विश्लेषकहरुले भने मोदी सरकारको नेपाल नीति असफल भएको बताएका छन्।वि’पक्षी दलका नेताहरुले पनि मोदी सरकार वि’रुद्ध वि
“यसरी स’म्पर्कमा आउँछन् श्री’मान बि’देशमा भएकाका श्रीमती र ए’कल म’हिला हेर्नुहोस्”
लवाई खवाई नै फरक छ । देख्दा हट्टाकट्टा पनि छन । कुरा गराई पनि फरक छ पोखराका २८ बर्षिय मनोज क्षेत्री (नाम परिवर्तन)को गेटअप हो यो । शहरका पुरुष यौ’नकर्मी उनको स’म्पर्कमा हप्तामा ४/५ जना महिला आउने गर्छन । उनीहरुसंग यौ’न स’म्पर्क पनि हुने गर्छ । अधिकां’श महिला उनलाई खोज्दै आउछँन् भने कतिपयलाई उनी पट्याउँछन् । आफुलाई पुरुष ‘यौ’नकर्मी’ भन्न नरुचाउने उनले तिर्खाएकोलाई प्यास मे’टाएको मात्र बताए । ‘मलाई खोज्दै आउँछन उनीहरु प्राय: संग यौ’न सम्प’र्क हुने गर्छ’ एक होटलमा साथीसंगै महिलालाई पर्खिएर बसेका उनले भने–‘कतिलाई त पट्याइन्छ तर धेरै महिलाहरुले खोजेर आउने गर्छन ।’ उनको दैनिकी नै फरक छ । हरेक दिन उनको भिन्दै तवरले बित्छ । समय मिलाएर उनीहरुसंग यौ’न स’म्पर्क गर्ने गरेको उनले बताए । मोवाइलबाटै सबै कुराकानी हुने र भेट हुने उनको भनाई छ । उनीहरुले सामान्यदेखि महंगा होटल बुक गर्ने गर्छन । कतिपय विबा
श्रीमानले यौ’न स’न्तुष्टी दिन सक्नु हुदैन तर ममा उ’त्तेजना बढि छ, समाधान के होला ?
सांकेतिक तस्बिर म ३७ वर्षकी भए। मेरो श्रीमान् ४१ वर्षको हुनुहुन्छ। श्रीमानमा भन्दा ममा बढी यौ न इ’च्छा छ। पहिले उहाँको इ’च्छा बढी थियो। हाम्रो विवाह भएको १० वर्ष भैसक्यो जब म इ’च्छा राख्छु, उहाँ मु’ड छैन, शरीर दुखेको छ, अ’ल्छी लागेको छ भनेर टार्नु हुन्छ। अहिले मलाई कतै उहाँको अरूसँग यौ सन म्बन्ध त छैन भन्ने लाग्न थालेको छ । यो मेरो शं’का मात्र हो कि वास्तविकता ? जसका कारण म निरा’श छु। यसको केही समाधान छ ? जवाफ- यौ न चा’हनास’म्बन्धी यस्ता प्रश्न धेरैले राख्ने गरेको मैले पाएकी छु। चिकित्साशास्त्रको भाषामा यसलाई यौ न चाह’नामा भिन्नता भनिन्छ। धेरैजसोले महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी यौ न इ’च्छा हुन्छ भन्ने धारणा राख्छन् तर महिलामा पनि यौ न चा’हना हुनु स्वाभाविक हो। यौ न चा’हना एउटा प्राकृतिक विषय हो। यसलाई सिकाइरहनु पर्दैन तर यसभित्रको च-रम रमाइलोपन र स न्तुष्टि प्रा’प्त गर्न भने केही सीप
४७ बर्षमा पनि ‘लठ्ठै’ पार्ने ऐश्वर्याको सुन्दरता, (हेराैँ १३ तस्बिर)
मुम्बई । कुनैबेला विश्व सुन्दरीसमेत बनेकी बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय उमेरले ४७ वर्ष पुगेकी छन् । एक सन्तानकी आमा ऐश्वर्याको वैशालु रूपरङमा कुनै कमी आएको छैन् । अझै उस्तै छ । ऐश्वर्याको सौन्दर्यको जादुले जो कोहीलाई ल’ठ्याउने गरेको छ । एकदम फिट एन्ड फाइन रहेकी उनी आफ्नो सौन्दर्य र स्वास्थ्यका लागि निकै सर्तक पनि रहेकी छन् । ऐश्वर्याको सौन्दर्यको रह’स्य उनले जिउने प्राकृतिक जीवनशैली नै हो । ऐश्वर्या प्राकृतिक खानपानमा रुची राख्छिन् । तारेको भोजन, जंक फुड, प्याकेज फुड, अ’ल्कोहल, धूम’पान आदि सेवन गर्दिनन् । नियमित रूपले जिम जान्छिन् । हिँड्न रुचाउँछिन् । पावर योगा गर्छिन् । दैनिक करिब ४५ मिनेट योग गर्छिन् । त्यसो त ऐश्वर्याको सौन्दर्य र फिटनेसमा उनको खानपानले पनि खास भूमिका खेलेको छ । दिनको सुरुआत ऐश्वर्या आफ्नो दिनको सुरुआत एक गिलास मनतातो पानी र मह वा कागतीबाट गर्छिन् । मनतातो
चौरजहारी घ’टना, वडाध्यक्ष’सहित ३२ जनालाई आ’जन्म कै’द माग्दै प्रहरीले हाल्यो मु’द्दा
काठमाडौं। रूकुम पश्चिमको चौरजहारीमा जेठ १० गते ६ जनाको ह’त्या भएको घट’नामा प्रहरीले ३४ जनावि’रूद्ध जिल्ला अदालतमा मु’द्दा हालेको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले दिएको जानकारी अनुसार चौरजहारी-८ का वडाध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्लसहित ३४ जनाले ६ जनाको क्रु’रतापूर्वक ह’त्या गरेको, बाँकीलाई घा’इते बनाएको र जातीय छु’वाछुत गरेको भन्दै तीन वटा क’सुरमा मु’द्दा दर्ता भएको छ। प्रहरीले जेठ १० गते साँझ जाजरकोटका नवराज बिक र उनका ५ जना साथीहरूलाई ह’त्या गरेर भेरीमा फालिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रहरीले अ’भियु’क्तहरूलाई आ’जन्म कै’दको माग गरेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए। ३४ अ’भियुक्तमध्ये २९ जनालाई प्रहरीले प’क्राउ गरिसकेको छ भने ५ जना फ’रार छन्। प्रहरीले नवराजकी प्रेमिका र उनकी आमालाई मतियारको भूमिका खेलेको कसु’र लगाएको छ। मतियारको क’सुरमा दो’षी प्रमाणित भए आ’जन्म कै’दको आधा स’जाय ह
सोफी चौधरीको ‘मादक’ रुप [फोटो फिचर]
मुम्बई – भारतीय गायिका तथा मोडल सोफी चौधरी सामाजिक सञ्जालमा खुबै एक्टिभ रहने गर्छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा अपडेट गरेका कारण फ्यानको मनमा धूम म’च्चाइरहेकी छिन् । सोफी केहि पहिला छुट्टी मनाउन माल्दिभ्स पुगिन। उनले माल्दिभ्सको समुन्द्री किनारबाट केही तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिन, जसलाई फ्यानहरूले निकै रूचाए। तस्बिरमा उनी वि-किनीमा देखिएकी छन्। जब तपाईंलाई महशुस हुन्छ कि यो वर्षको अन्तिम सोमबार हो र तपाईंलाई काममा जानु छैन,’ उनले आफ्नो तस्रि सेयर गर्दै सामाजिक सञ्जालमा छुट्टी मनाउनुको खुसी व्यक्त गरेकी छन्। सोफीले पप गायिकाको रूपमा करिअर सुरु गरेकी थिइन्। पछि उनी मो’डल हुँदै नायिकासमेत भइन्। एक समय उनले एमटिभीमा भिडियो जकीको रूपमासमेत आफ्नो पहिचान बनाएकी थिइन्। उनले बलिउडमा ‘शादी नम्बर १’ फिल्मबाट प्रवेश गरेकी थिइन्।
बे’होस बुबालाई छाडेर अस्पताल पुगिन् सुशान्तकी बहिनी
सुशान्तलाई अहिले मुम्बइको क्रोपर अस्पतालमा राखिएको छ । बुबा बे होस भएकोले उनको बैनी अस्पताल मुम्बइ- चर्चित बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आ त्मह त्याको खबरले उनका लाखाैँ प्रशंकहरुलाई निकै दुःखी बनाएको छ। एक्लै बस्दै आएका सुशान्त सिंह राजपुत मुम्बई स्थित आफ्नै घरमा झु ण्डि’एको अवस्थामा फे’ला परेका हुन। अभिनेता राजपुतको निध’नले बलिउडलाई अर्को ठूलो ध क्का लागेको छ। बलिउडका चर्चित सेलिब्रेटीहरुले राजपुतले आ त्मह त्या गरेको खबर सुन्दा स्त’ब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सुशान्तलाई अहिले मुम्बइको क्रोपर अस्पतालमा राखिएको र उनको बुबा बे होस भएकोले उनको बैनी अस्प’ताल पुगेकी छन् ।उनको बैनी नितु सिंह साथीसँग अस्पतालमा आइपुगेकी हुन् । ३४ वर्षको उमेरमा नै सुशान्तले देहत्या’ग गरेका हुन् । निलो टिसर्टमा सुशान्तकी बहिनी
एमएस धोनी चलचित्रमा सुशान्तको बुबाको भूमिका निभाएका अनुपम खेरले उनको आ त्मह त्याको खबर सुनेपछि गहभरी आशु पार्दै यस्तो खुलासा गरे (भिडियो)
एजेन्सी, ३२ जेठ । बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतले आ त्मह त्या गरेका छन्। मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा उनले आइतबार पा सो लगाएर आ त्मह त्या गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। राजपुतले सन् २०१३ मा ‘काइपोचे’ फिल्मबाट बलिउडमा डेब्यु गरेका थिए। सुशान्त अभिनित ‘केदारनाथ’, ‘छिछोरे’, ‘एम.एस धोनी’, ‘पिके’, ‘शुद्ध देसी रोमान्स’, ‘सोनचिडैया’ लगायतका फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन् । फिल्म अगाडि उनी टेलिभिजनमा चर्चित सिरियल पबित्र रिस्ताबाट चर्चित थिए । राजपुतले चर्चित भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनीको वायोपिकमा मुख्य भूमिका निभाएका थिए। त्यस्तै उनि डान्स रियलिटी शो ‘जरा नच के दिखा २ र झलक दिखला जा ४ मा पनि देखिए। ३४ वर्षीय राजपुतले पछिल्लो समय ‘केदारनाथ’ फिल्ममा अभिनय गरेका थिए। उनका साथीले आज तकलाई बताए अनुसार उनी पछिल्लो ६ महिनादेखि डिप्रेसनको शिकार थिए । राजपु
प्रख्यात अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले चर्चित भारतीय कलाकार सुशान्त सिंह राजपुतले देहत्याग गरेको खबर सुन्दा आफू स्तब्ध भएको बताएकी छन्। ‘यो सुन्दा म निकै स्तब्ध भएँ… बिभिन्न विषयमा उनले गर्ने बहस म निकै मन पराउँथेँ… मेरो हार्दिक समवेदना! ओम शान्ति…,’ कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेकी छन्। सुशान्त सिंह आइतबार मुम्बाईस्थित आफ्नै घरमा झु ण्डिएको अवस्थामा भेटिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। ३४ वर्षीय सुशान्तले के कारणले यस्तो गरे भन्ने विषयमा केही नखुलेको बताइएको छ। मुम्बई प्रहरी अहिले उनको घरमा पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। उनी ६ महिनादेखि डि प्रेसनमा रहेको भन्दै प्रहरीले डिप्रेसनकै कारण उनले देहत्याग गरेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। टेलिसिरियलबाट करिअर सुरुवात गरेका उनको पहिलो सिरियल ‘किस देशमे हे मेरा दिल’मा अभिनय गरेका थिए। उनको विशेष परिचय भने एकता कपुरको धारावाहिक